LUK 8 - Baịbụl Nsọ [Igbo Bible 1988] - (LUK 8)
Mgbe ihe ndị a gasịrị, Jisọs gara nꞌobodo ukwu nile na nꞌobodo nta nile na-ekwusa ozi ọma alaeze Chineke. Ndị ozi ya iri na abụọ ahụ sokwa ya.
Mgbe igwe mmadụ sitere nꞌọtụtụ obodo gbaa Jisọs gburugburu, Jisọs meghere ọnụ ya jiri ilu gwa ha okwu sị,
“Otu onye ọrụ ubi gara nꞌubi ya ịgha mkpụrụ, mgbe ọ nọ na-agha mkpụrụ ndị a, ụfọdụ nꞌime mkpụrụ ahụ dara nꞌakụkụ ụzọ ebe ndị mmadụ zọrọ ha ụkwụ ụmụ nnụnụ bịakwara tụrịa ha loo.
Ụfọdụ nꞌime mkpụrụ ndị a dakwasịrị nꞌelu nkume. Mgbe ha toro ha kpọnwụrụ nꞌihi na aja dị nꞌelu nkume ahụ enweghị ike ịmịta mmiri nke mkpụrụ ahụ ji adị ndụ.
Ụfọdụ nꞌime mkpụrụ a dara nꞌala ebe ogwu ogwu dị. Ogwu ndị a tokwara kpagbuo ha.
Ụfọdụ mkpụrụ dara nꞌezi ala. Ha pupụtara, too, mịa mkpụrụ dị narị nꞌọnụ ụgụgụ karịa nke a kụrụ.” Mgbe Jisọs kwusịrị okwu a, ọ gwara ha sị, “Onye ọ bụla nꞌime unụ nwere ntị ịnụ ihe, ya nụrụ ihe ndị a m kwuru.”
Mgbe e mesịrị, ndị na-eso ụzọ ya bịakwutere ya jụọ ya sị, “Kọwaara anyị ihe ilu mkpụrụ a a ghara pụtara.”
Jisọs zara sị ha, “Ọ bụ unu ka ọ dịrị ịmata ihe omimi nile nke alaeze Chineke, ma ndị ọzọ ga-anụ ya nanị nꞌilu. Site nꞌụzọ dị otu a, ha ga-ele anya leekwa ma ha agaghị ahụ ihe ọ bụla. Ha ga-egekwa ntị gee, ma ha agaghị aghọta.
“Ugbu a nụrụnụ nkọwa ilu ahụ. Mkpụrụ ahụ a ghara bụ okwu Chineke.
Mkpụrụ nke dara nꞌebe ogwu ogwu dị nọchiri anya ndị nụrụ okwu Chineke kwere nꞌihe ha nụrụ. Ma oke echiche banyere akụ na ihe ụtọ nke ụwa na-akpagbu okwu ahụ ha nụrụ. Ha adịghị enwekwa ike nyere ndị ọzọ aka ịmata na ikwere nꞌozi ọma Chineke.
“Mmadụ ọ bụla adịghị, nke na-amụnye iheọkụ zoo ya nꞌime igbe ma ọ bụ dọnye ya nꞌokpuru ihe ndina. Kama mgbe mmadụ mụnyere iheọkụ ọ na-adọkwasị ya nꞌelu tebulu ka ndị ọ bụla na-abata nꞌụlọ ahụ jiri ya hụ ụzọ.
Ọ dịghị ihe ọ bụla zoro ezo nke na-agaghị emesịa pụta ìhè, ọ dịkwaghị ihe ọ bụla mmadụ mere nke ọ dị ka e kpugidere ihe ugbu a, nke mmadụ nile na-agaghị emesịa mata.
Ya mere, kpacharanụ anya otu unu si ege ntị. Nꞌihi na ọ bụ onye ahụ nwere ihe ka a ga-enye ọzọ, ma onye ahụ na-enweghị ihe ka a ga-anapụ ọ bụladị ihe ahụ o chere na o nwere.”
Nꞌoge a, nne Jisọs na ụmụ nne ya bịara nꞌebe ọ nọ. Ma ha enweghị ike ịbịaru ya nso nꞌihi na ọtụtụ mmadụ gbara ya gburugburu.
Mgbe ahụ otu onye nꞌime ndị ahụ gbara Jisọs gburugburu kpọrọ Jisọs gwa ya sị, “Lee na nne gị na ụmụnne gị guzo nꞌezi. Ha na-achọ ịhụ gị.”
Jisọs zara ya sị, “Nne m na ụmụnna m bụ ndị ahụ na-anụ okwu Chineke ma jiri ihe ha nụrụ mee ihe Chineke na-achọ.”
Otu ụbọchị Jisọs na mmadụ iri na abụọ ahụ na-eso ụzọ ya biliri banye nꞌụgbọ mmiri. Jisọs gwara ha sị, “Ka anyị gafeenụ nꞌofe ọzọ nke osimiri.” Ha kwọliri ụgbọ ha bido ije.
Mgbe ha nọ nꞌụzọ, Jisọs bidoro ịrahụ ụra. Oke ifufe bidoro ife nke na-ebugharị mmiri ahụ mee ka mmiri bido ịbanye nꞌụgbọ mmiri ha, tutuu ruo mgbe ụgbọ ha chọrọ imikpu.
Ndị na-eso ụzọ Jisọs jiri ọsọ na iti mkpu jeruo nꞌebe Jisọs dina kpọtee ya sị ya, “Nna anyị ukwu! Nna anyị ukwu! Lee na anyị alaala nꞌiyi!” Jisos tetara baara ifufe ahụ na ebili mmiri ahụ mba. Ha dara jụụ, ebe nile deere jii.
Mgbe ahụ Jisos jụrụ ndị na-eso ụzọ ya si, “Ebeekwanụ ka okwukwe uni di?” Ma ha tụrụ nnọọ oke egwu sịritaa onwe ha, “Onye ka nwoke a bụ, onye ikuku na ebili mmiri na-eme ihe o nyere ha nꞌiwu.”
Emesia, ha rutere nꞌobodo Gadarin nke dị nꞌofe nke ọzọ, nke ya na Galili na-echerita ihu.
Mgbe nwoke a hụrụ Jisọs, ọ bịara daa nꞌihu ya kwaa akwa nꞌoke olu sị, “Gịnị ka mụ na gị nwekọrọ Jisọs Ọkpara Chineke dị elu? Biko arịọ m gị, atala m ahụhụ dị ukwuu.”
Mgbe ndị na-elekọta ezi ahụ hụrụ ihe mere, ha gbaara ọsọ gaa nꞌobodo nile dị gburugburu ebe ahụ, kọọrọ ha ihe mere.
Mgbe ahụ ndị nile bi na Gadarin na nꞌobodo gbara ebe ahụ gburugburu rịọrọ Jisọs ka ọ hapụrụ ha obodo ha, nꞌihi na ụjọ dị ukwuu tụrụ ha. Jisọs banyekwara nꞌime ụgbọ mmiri ahụ bido ịgaghachi ebe o si bịa.
“Laghachi nꞌezinụlọ gị kọọrọ ha ihe Chineke meere gị.” Nwoke ahụ lara, gbasaa akụkọ ihe Jisọs meere ya nꞌobodo ahụ nile.
Emesịa, Jisọs lọghachiri nꞌobodo Kapanọm. Nꞌebe ahụ ndị mmadụ jiri ọṅụ nabata ya, nꞌihi na ha na-ele anya ọbịbịa ya.
Jairọs mụtara nanị otu nwanta nwanyị, onye gbara afọ iri na abụọ nꞌoge ahụ. Nwanta nwanyị a nọkwa nꞌọnụ ọnwụ. Mgbe Jisọs so Jairọs na-aga nꞌụlọ ya, ọtụtụ ndị so Jisọs na-enu ibe ha aka, na-achọ ịbịaru Jisọs nso.
Nꞌime igwe mmadụ a, o nwere otu nwanyị nọrọla nꞌọrịa afọ iri na abụọ. Ọrịa ọ na-arịa bụ ịgba ọbara nke na-adịghị akwụsị akwụsị. O mefuola ego dị ukwuu nꞌaka ndị dibia dị iche iche, ma o nwebeghị onye nwere ike gwọọ ya.
O jisiri ike site nꞌetiti ndị mmadụ bịa nꞌazụ Jisọs metụ ọnụ uwe Jisọs aka. Otu mgbe ahụ o metụrụ uwe Jisọs aka, ọbara ahụ kwụsịkwara ịgba ọzọ.
Mgbe ahụ Jisọs tụgharịrị jụọ ajụjụ sị, “Onye metụrụ m aka?” Mgbe ọ na-enweghị onye pụtara kwuo sị na ọ bụ ya, Pita na ndị ọzọ so Jisọs gwara ya sị, “Nna anyị ukwu, lee igwe mmadụ gbara gị gburugburu, ndị na-achọsi ike ịbịaru gị nso, ị sikwanụ aṅaa na-ajụ ajụjụ banyere onye metụrụ gị aka?”
Ma Jisọs zara sị ya, “O nwere otu onye metụrụ m aka, nꞌihi o metụrụ m nꞌahụ na ike esitela m nꞌahụ pụọ.”
Mgbe nwanyị ahụ hụrụ na ọ dịkwaghị ihe o nwere ike ime izo onwe ya, o jiri egwu na ahụ ịma jijiji bịa daa nꞌala nꞌihu Jisọs, kọọrọ ya ihe nile mere nꞌihu mmadụ nile. Ọ gwakwara Jisọs ihe mere o ji metụ ya aka.
Jisọs gwara ya sị, “Ada m nwanyị, atụla egwu, okwukwe i nwere nꞌime m agwọọla gị.”
Mgbe ọ nọ na-agwa nwanyị ahụ okwu, otu onye sitere nꞌụlọ Jairọs bịarute ebe ahụ gwa Jairọs sị, “Nwa gị nwanyị anwụọla, enyekwala onye ozizi nsogbu.”
Ma mgbe Jisọs nụrụ ihe onye ahụ kwuru, ọ gwara Jairọs sị, “Atụla egwu, kama kwere na m, a ga-emekwa ka ahụ dị ya mma.”
Mgbe ha ruru ụlọ Jairọs, Jisọs ekweghị ka onye ọ bụla ọzọ soro ya baa nꞌime ụlọ ahụ, Ọ kpọọrọ nanị Pita na Jemes na Jọn na nne na nna nwanta ahụ, banye nꞌime ụlọ ahụ.
Mgbe ndị ahụ nụrụ ihe Jisọs kwuru, ha chịrị ya ọchị, nꞌihi na ha onwe ha maara na nwanta nwanyị ahụ anwụọla.
Jisọs zipụrụ ndị nile na-akwa akwa nꞌụlọ ahụ ezi. Ọ banyere, jide nwanta ahụ nꞌaka ya, selie ya elu, kpọọ ya sị, “Nwa m nwanyị, bilie!”